Kedu Uru Anyị Nwere Ike Inweta Site na Mgbakwunye PEA?
Palmitoylethanolamide (agwa) nnyocha
Enwere akụkọ na Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ kwadoro itinye akwụkwọ maka usoro ọgwụgwọ iji gwọọ COVID-19 site na iji ọgwụ sịntetik na-egosipụta omume nke molekul dị na wii wii.
A na-ekwenye na ọgwụ sịntetik a na - akpọ ultramaronized palmitoylethanolamide (micro PEA) bụ ihe na - egbochi mgbochi. Palmitoylethanolamide (PEA) bụ "acid fatty acid" nke yiri endocannabinoid, otu n'ime ụmụ irighiri ihe dị n'ime mmanya na ebumnuche ndị na-anabata CB2. A na-eche na ndị na-anabata CB2 na-agbanwe ma mbufụt na ihe mgbu n'ime ahụ mmadụ.
Ebe ọ bụ na ejirila [micro PEA] mee ihe na Europe maka afọ 20, ụfọdụ ndị na-elekọta ahụike Italiantali nọ na-akwado iji micro PEA na-agwọ ndị ọrịa COVID-19 na ha na-achọpụta ihe ịga nke ọma.
Ihe siri ike COVID-19 bụ nke na-egosi oke iwe na-emetụta oke ọkụ nke nwere ike ibute oke mmiri cytokine. “Micro PEA abụghị nje na-egbu nje, mana ha kwenyere na ọ nwere ike belata nzaghachi ahụ, nke nwere ike ịnwụ.
Palmitoylethanolamide (PEA) bụ ihe nwere ike ime n’ahụ n’ahụ anyị n’otu ụdị nke amy acid amide. Ọ bụ ya mere egbugbere ọnụ nke na-agwụ ike. A na-ahụkarị PEA na ahịhịa na ụmụ anụmanụ.
Enwere ike ịchọta Palmitoylethanolamide (PEA) na nri dịka mmiri ara ehi, soy agwa, agwa agwa, soy lecithin, anụ, akwa na ahụekere.
Onye mmeri Nobel, Levi-Montalcini mere ka a mata Palmitoylethanolamide (PEA) dị ka ihe na-apụtakarị ala, na-akọwa uru ọ bara n'ịgwọ ọrịa na ihe mgbu na-adịghị ala ala. Gbaso ya chọpụtara, ọtụtụ narị ndị ọkà mmụta sayensị na-e mere na-egosi na ọ bụ nnọọ irè na mma iji. A kọwara Palmitoylethanolamide (PEA) n'ihe odide sayensị dị ka a eke mgbu.
Phcoker bụ ọkachamara ọkachamara iji mepụta ntụ ntụ Palmitoylethanolamide (PEA)
Ngwa ngwa ziga ase: Kpọtụrụ anyị
Palmitoylethanolamide uru - Kedu ihe eji eme Palmitoylethanolamide?
Palmitoylethanolamide (PEA) bụ fatty acid amide ma mepụta ya ma rụọ ọrụ n'ime ahụ anyị maka ịhazi ọrụ dị iche iche. Ọ bụ abụba acid amide dị egwu, nke so na klaasị nke nuklia na-akpata agonists. Palmitoylethanolamide (PEA) achọpụtala n'ezie n'ọtụtụ ebe na ọtụtụ ụdị anụmanụ na-agba ọkụ, yana n'ọtụtụ ule ahụike.
Ọ bụ ihe mgbu na-egbu mgbu ma nwee ike iji ya mee ihe mgbu na mbufụt. Ọ na-etinyekwa mmetụta ndị ọzọ bara uru dị ka ọrịa neuropathic, fibromyalgia, ọtụtụ sclerosis, ọnya ugboro ugboro, ọrịa nke akụkụ okuku ume na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ.
Benefitsfọdụ uru palmitoylethanolamide nke a na-akọ gụnyere;
m. Na-akwado ahụike ụbụrụ
Palmitoylethanolamide uru n'ime ịkwalite ahụike ụbụrụ na-esonyere ike ya ịlụ ọgụ mbufụt na nkwalite mkpụrụ ndụ neural na-adị ndụ. Ekwuru nke a na ndị mmadụ na-arịa ọrịa neurodegenerative na ọrịa strok.
Dịka ọmụmaatụ, na nyocha nke mmadụ 250 na-arịa ọrịa strok, achọtara nkwụnye Palmitoylethanolamide nke enyere yana luteolin iji bulie mgbake. A chọtara PEA iji mee ka ncheta dịkwuo mma, ụbụrụ ụbụrụ izugbe yana ịrụ ọrụ kwa ụbọchị. Achọpụtara mmetụta ndị a nke palmitoylethanolamide ntụ ntụ ụbọchị 30 mgbe mgbakwunye ma mụbaa ihe karịrị otu ọnwa ọzọ.
ii. Wee belata ọtụtụ ihe mgbu na mbufụt
Ndị ọkà mmụta sayensị na-enye ihe àmà dị ukwuu nke palmitoylethanolamide na-ebelata ihe mgbu. N’ezie, palmitoylethanolamide na-enye ihe mgbu na ụdị mgbu dị iche iche. Ufodi ihe omumu nke gosiputara ihe oganihu ihe palmitoylethanolamide bu;
N'ime nnyocha metụtara ụmụ anụmanụ, palmitoylethanolamide mgbakwunye yana quercetin a chọtara iji wepụta ahụ efe site na mgbu mgbu nke nkwonkwo yana melite ọrụ nkwonkwo yana nchedo cartilage na mmebi.
Studiesfọdụ ọmụmụ mmalite na-egosi na PEA nwere ike inye aka belata ihe mgbu akwara na ndị ọrịa mamịrị (ọnya ọrịa neuropathy).
N'ime ọmụmụ ọzọ ya na mmadụ iri na abụọ, ọnụọgụ palmitoylethanolamide nke 12 na 300 mg / ụbọchị nke enyere ya maka ihe dị ka izu atọ ruo asatọ iji belata ike nke mgbu na-adịghị ala ala na akwara.
Nnyocha nke ndị ọrịa 80 na-arịa ọrịa Fibromyalgia chọpụtara na PEA na mgbakwunye na ọgwụ ndị ọzọ maka nsogbu ahụ nwere ike belata ihe mgbu.
Ọzọkwa, ọtụtụ ọmụmụ ndị ọzọ gosipụtara ikike mgbu palmitoylethanolamide gụnyere mgbatị ahụ mgbu, mgbu sciatic, azụ mgbu, mgbu kansa n'etiti ndị ọzọ.
iii. Na-enyere aka belata mgbaàmà nke ịda mbà n'obi
PEA na-enweghị isi na-emetụta ndị nnabata na-ahụ maka ọnọdụ. Studiesfọdụ ọmụmụ na-egosi nkwụda ụjọ nchegbu Palmitoylethanolamide dị ka ọrụ dị mkpa n'ịlụso ịda mbà n'obi ọgụ.
N'ime nyocha nke ndị ọrịa 58 nwere nkụda mmụọ, palmitoylethanolamide emeju na 1200 mg / ụbọchị yana ọgwụ antidepressant (citalopram) nke enyere maka izu isii ka achọpụtara iji melite ọnọdụ obi na mgbaàmà nke ịda mbà n'ozuzu ya.
iv. Ọ na-enyere ndị nkịtị oyi
Palmitoylethanolamide na-erite uru iji luso ọgụ nkịtị na-akpata na ike ya ibibi nje nke na-ebutekarị oria (nje na-efe efe). N'ụzọ dị ịtụnanya, oyi na-atụkarị na-emetụta ọtụtụ ebe na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ ọ bụla karịsịa ndị nwere ọgwụ mgbochi.
Nnyocha na ndị agha na-eto eto 900 gosipụtara na ọgwụ palmitoylethanolamide nke 1200 mg kwa ụbọchị belatara oge nke ndị na - eso ya gwọọ site na oyi yana mgbaàmà ndị dị ka isi ọwụwa, ahụ ọkụ na akpịrị mgbu.
v. lowers mgbaàmà nke insular (multiple) sclerosis
Site na palmitoylethanolamide ọgwụ mgbochi palmitoylethanolamide, ihe ịrụ ụka adịghị ya na PEA dabara adaba maka ịgwọ ọtụtụ sclerosis.
Na nyocha nke ndị ọrịa 29 na-arịa ọrịa multiple sclerosis, PEA gbakwunyere n'ọkwa ọkọlọtọ interferon IFN-β1a ka ọ belata ihe mgbu ahụ wee mee ka ndụ ndị ọrịa dịkwuo mma.
vi. Palmitoylethanolamide meziwanye metabolism
Palmitoylethanolamide (PEA) nwere ike ijikọ na PPAR-, onye na-anabata ihe maka metabolism, agụụ, ọnwụ ọnwụ na abụba na-ere ọkụ. Mgbe a na-akpali onye na-anabata PPAR ị nweta ahụ ike dị elu nke na-enyere ahụ aka ịba abụba ndị ọzọ na mmega ahụ n'ihi ya ị ga-ebu ibu.
vii. Palmitoylethanolamide nwere ike belata agụụ gị
Palmitoylethanolamide nwere ike belata ihe na-egosi n’ike ya na-emetụta agụụ gị. Yiri na ịkwalite metabolism, mgbe a na-eme ka onye na-anabata PPAR- ọ ga - eduga n ’mmetụta nke afọ ojuju mgbe ị na - eri nri ga - enyere gị aka ijikwa ọtụtụ calorie riri.
Ọzọkwa, a na-ahụta PEA dị ka ethanolamides acid na-abụ abụba nke na-arụ ọrụ dị mkpa na omume nri. Na nyocha nke oke oke nwere oke ibu, enwetara ihe mgbakwunye PEA na 30 mg / n'arọ ahụ maka izu ise ka ọ dị obere belata nri ha nwere, abụba buru ibu ma na-ebute oke ahụ.
viii. Palmitoylethanolamide mmetụta mgbochi mkpali n'oge mmega ahụ
Otu nwere ike ịnweta mgbu na mbufụt n'oge na mgbe mgbatị ahụ n'ihi oke ibu. Ọfọn, mgbakwunye PEA nwere ike inye aka igbochi nke a site na-akpali akpali mgbochi ọrụ nke PPAR- α onye nnata. Palmitoylethanolamide nwekwara ike igbochi ntọhapụ nke enzymes na-afụ ụfụ n'ime ya site na anụ ahụ ụmụ mmadụ na-etinye adipose.
Kedu onye kwesiri iwere mmezi nke Palmitoylethanolamide (PEA)?
Mgbakwunye Palmitoylethanolamide (PEA) dabara adaba maka nhụjuanya ọ bụla site na mgbu na-egbu mgbu ma ọ bụ ọnya na onye ọ bụla nwere mmasị ịta ahụ ma ọ bụ na ọgwụ. Achọpụtala PEA ka ọ na - eme ka uru nke ọgwụ ndị ọzọ dịkwuo mma. Ọ bụ nhọrọ maka ndị na-enweghị ahụ efe na iji ọgwụ mgbu edepụtara.
Palmitoylethanolamide nchegbu enyemaka bụ ezigbo àgwà na-egosi na onye ọ bụla nwere ike ịda mbà ma ọ bụ na-ata ahụhụ site na ịda mbà n'obi kwesịrị iji PEA.
Ọzọkwa, mmadụ ga-aghọrọkwu mkpụrụ osisi PEA site na ntinye nri ebe ọ bụ na ndị nrụpụta na-achọ usoro ndị ga-eme ka palmitoylethanolamide bioav adị nke ahụ gị.
Kedu ihe PEA sitere na ya?
A na - ahụkarị PEA n'ime ahụ anyị yana anụmanụ na osisi. Agbanyeghị, maka ndị nwere mgbu na-adịghị ala ala ma ọ bụ mbufụt, PEA na-eme ezughị ezu ya mere ọ dị mkpa mgbakwunye PEA.
A pụrụ inweta Palmitoylethanolamide site na isi mmalite nri ndị jupụtara na protein dị ka mmiri ara ehi, anụ, agwa soy, soy lecithin, ahụekere na agwa ubi n’etiti ndị ọzọ. Otú ọ dị, PEA enwetara site na isi nri dị obere. Nke a na - eme ka ihe ọ palmụ palmụ Palmitoylethanolamide dị mkpa iji gboo mkpa nri a.
Phenethylamine na Palmitoylethanolamide ha abụọ nwere ike ịkpọ PEA, mana ha dị iche iche ngwaahịa.
Phenethylamine (PEA) bụ ihe ndị sitere n'okike, monoamine alkaloid, na ịchọta amine, nke na-arụ ọrụ dị ka usoro nhụjuanya nke etiti na-akpali ụmụ mmadụ. Phenethylamine na - eme ka ahụ nwee ike mepụta ụfọdụ kemịkalụ nke na - arụ ọrụ na ịda mba na ọnọdụ uche ndị ọzọ.
N'iji 500mg-1.5g kwa onunu ogwu, kwa awa ole na ole, PEA na-enye onye ọrụ ahụ mmetụta nke euphoria, ume, mkpali, yana ọdịmma mmadụ niile.
Agbanyeghị, biko jiri nwayọ rịba ama na Phenethylamine (PEA) abụghị Palmitoylethanolamide (PEA). Enweghi nkwado nke Phenethylamine site na FDA maka iji ọgwụgwọ. Palmitoylethanolamide (PEA) bu ihe okike nke aru na emeputa; ọ dị oke irè ma dịkwa mma iji dị ka mgbakwunye maka mgbu na mbufụt.
Ọ bụ PEA emeju mma?
Palmitoylethanolamide (PEA) bu ihe okike nke aru na emeputa; ọ dị oke irè ma dịkwa mma iji dị ka mgbakwunye maka mgbu na mbufụt. Enweghị nsogbu ọ bụla na-akpata Palmitoylethanolamide akọrọ yana enweghị mmekọrịta ọ bụla na ọgwụ ndị ọzọ.
Kedu mmetụta ndị dị na PEA?
Enweghi mmetụta dị oke egwu ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta ọgwụ ọjọọ akọgogo. Enwere ike iwere Palmitoylethanolamide yana ihe ọ bụla ọzọ. Ọ na - eme ka ihe mgbu na - akpata ihe mgbu na - egbu egbu.
Ndi umu nwanyi di ime ghara iji ya.
Palmitoylethanolamide nwere ike inye aka na-edozi ahụ ọkụ na mgbu na-adịghị ala ala.
Ekwesịrị iwere ya naanị n'okpuru nlekọta ahụike.
Palmitoylethanolamide ọkara ndụ - Ogologo oge ole ka ọ na-ewe ka pea rụọ ọrụ?
Enwere ike iwere Palmitoylethanolamide (PEA) yana ọgwụ ndị ọzọ na-egbu mgbu ma ọ bụ naanị ya, dịka onye ọrụ ahụike gị gwara gị, iji kwado enyemaka mgbu.
Irè maka enyemaka mgbu bụ 8 hr
Nsonaazụ na-agbanwe; Nsonaazụ n'ime 48 hr na ụfọdụ ndị mmadụ, mana jiri izu 8 maka nsonaazụ kachasị, enwere ike iji ogologo oge maka mgbu na-adịghị ala ala.
Palmitoylethanolamide na-arụkwa ọrụ na-enweghị isi iji mee ka ụfọdụ ndị nabatara ihe omume dịka ndị na-anabata cannabinoid. PEA na-eme ka ndị na-anabata cannabinoid (CB1 na CB2) na-eme ihe n'ụzọ na-enweghị isi site na ịme ihe dị ka enzyme (FAAH -fatty acid amide hydrolase) nke metụtara mbibi nke cannabinoid anandamide. Nke a na-enyere aka n'ịkwalite ọkwa nke anandamide na ahụ anyị, nke bụ maka izu ike na ịlụ ọgụ mgbu.
Gịnị bụ PEA maka enyemaka mgbu?
Palmitoylethanolamide (PEA) bu ihe okike nke aru na emeputa; ọ bụ abụba acid amide dị egwu, nke so na klaasị nke agonists nuklia, enwere ike iji ya dị ka mgbakwunye maka ọgwụgwọ mgbu na mbufụt. PEA bụ ihe okike, nchedo, abụba abụba mepụtara na ahụ anyị, na-enyere aka ịkwado akwara akwara myelin maka ezigbo akwara.
PEA bụ acid fatty acid nke na-arụ ọrụ cellular dị iche iche na mbufụt na mgbu na-adịghị ala ala, ma egosila na ọ na-enwe neuroprotective, anti-inflammatory, anti-nociceptive (mgbochi mgbu) na mgbochi convulsant Njirimara. Ọ na-ebelata mmeghari afọ nke eriri afọ na mmụba sel kansa, yana ichebe vaskụla endothelium na obi ischemic. Ọtụtụ mgbe na ndị nwere nsogbu na-adịghị ala ala, ahụ anaghị emepụta pea zuru ezu, yabụ site na iji PEA iji gbakwunye ụkọ ahụ nwere ike ịba uru na inyere aka ịgwọ ọnọdụ ndị a.
Agwa ọ bụ mgbochi mkpali?
Palmitoylethanolamide (PEA) bụ ihe na-adọrọ mmasị na-agwọ ọrịa na-egbu egbu ma nwee ike ịnwe nnukwu nkwa maka ọgwụgwọ ọtụtụ nsogbu (auto), gụnyere ọrịa obi na-egbu egbu na ọrịa na-egbu egbu nke CNS.
Nri ọ dị mma maka ọrịa ogbu na nkwonkwo?
Palmitoylethanolamide (PEA) na-enye abamuru maka ọrịa ogbu na nkwonkwo ma na-ebelata mmepe na ndozi nke mgbu na-adịghị ala ala kamakwa iji nyere aka belata ọganihu nke mbibi nkwonkwo metụtara ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Kedu ihe bụ ihe mgbu kachasị mma maka mgbu akwara?
PEA (palmitoylethanolamide) dị kemgbe afọ ndị 1970 mana ọ na-enweta aha dị ka onye ọrụ ọhụụ n'ịgwọ mbufụt na mgbu. Enweghi mmekorita ogwu ma obu ihe ojoo.
PEA bụ abụba abụba nke na-enyere aka ịkwado akwara myelin maka ezigbo ọrụ akwara.
Enweghi vitamin site na otu B nwere ike ọ bụghị naanị na-akpata mgbu akwara, kamakwa ọ na-abawanye.
Ihe mgbaàmà ndị ọzọ na-adịghị mma nwekwara ike ịpụta, dị ka ịgagharị agagharị, ịpị aka na ịpị aka na ụkwụ, inwe mmetụta dị ka a ga - asị na mmadụ na - aga ije na waya ma ọ bụ na owu ma ọ bụ na -
aka na ụkwụ.
Obere vitamin B1 na - ebute nsogbu na arụ irighiri akwara ma na - akpata neuropathy na mgbu akwara. Mgbe ị na-agbakwunye vitamin B1, ihe mgbu na-ebelata na akwara ọrụ ka mma. Enwere ike iwere vitamin B1 yana PEA, nke a na-enye nkwado kachasị maka ịrụ ọrụ nke irighiri akwara, na-egbochi mgbu akwara ma ọ bụ ihe mgbu ka njọ. Nnyocha e mere na nso nso a egosila na ọtụtụ ndị nwere ihe mgbu na-adịghị ala ala, ndị agadi na ndị na-arịa ọrịa shuga nwere oke oke vitamin ndị a n’ọbara ha. Nke a bụ otu n'ime ihe kpatara na ndị a enweghị ike ịgwọ naanị ndị na-egbu mgbu; ha chọrọ
karia nke a. PEA gbakwunyere vitamin B na-akwado usoro ụjọ na usoro ahụ jijiji nke mgbu akwara.
Palmitoylethanolamide bụ cannabinoid?
CBD (Cannabidiol) bụ ogige ewepụtara na hemp na wii wii. Ọ bụ ezie na anụ ahụ na -emepụta cannabinoids site na okike, a tụkwasịla CBD iji gboo mkpa ahụ.
Cannabinoids bụ kemịkalụ na-arụsi ọrụ ike ndu nke arụpụtara n'ime ahụ nke na-ahụ maka ebe nchekwa, mgbu, agụụ na ije. Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwupụta na cannabinoids nwere ike ịba uru n'ibelata mbufụt na nchekasị, na-ebibi mkpụrụ ndụ cancer, na-enye izu ike na akwara ma na-emekwa ka agụụ juwanye afọ.
PEA bụ amide acid amide nke arụpụtara n'ime ahụ ma nwee ike ịkpọ ya cannabimimetic. Nke a pụtara na ọ na-emetụta ọrụ nke CBD n’ime ahụ gị.
Ma CBD ma PEA na-eme ihe n'ụzọ na-apụtachaghị ìhè site na igbochi fatty acid amide hydrolase (FAAH), nke na-akụkarị anandamide ma mee ka ọ daa mbà. Nke a na - ebute anandamide dị elu. Anandamide na-ekere òkè dị mkpa na ọnọdụ na mkpali. Ọnụ ọgụgụ anandamide dị elu na-emetụta usoro endocannabinoid nke ọma.
PEA enwetala ewu ewu ma soro CBD na-asọmpi. A na-ahụta PEA dịka ihe nchekwa dị mma na CBD n'ihi nsogbu iwu na-eche ya ihu yana eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ mmadụ enweghị ike ịnabata ọkwa dị elu nke 'okwute' na-abịa na CBD.
Ọzọkwa, PEA dị ọnụ ala karịa CBD. Otú ọ dị, enwere ike iji PEA na mgbakwunye na CBD iji nweta mmetụta synergetic.
Pea ọ bụ endocannabinoid?
MBA, Palmitoylethanolamide (PEA) bụ endocannabinoid-dị ka egbugbere ọnụ lipid na analgesic na mgbochi mkpali Njirimara. PEA na-akwado ECS site na ịmegharị akara ngosi endocannabinoid ma na-emezigharị ihe ntinye aka na cannabinoid.
Usoro endocannabinoid (ECS) bụ usoro ihe dị mkpa nke na-achịkwa ma na-edozi ọtụtụ ọrụ physiological na ahụ. Nnyocha na ECS emeela ka nchọpụta nke ọ bụghị naanị endocannabinoids dị ka anandamide (AEA) na 2-arachidonoylglycerol (2-AG), kamakwa ndị ogbugbo lipidyyyhanhanlamide (PEA) dị ka endocannabinoid. Ogige ndị a dị ka endocannabinoid na-ekerịta otu ụzọ metabolic nke endocannabinoids mana enweghị njikọ njikọta maka oge gboo Cannabinoid ihe nnabata ụdị 1 na ụdị 2 (CB1 na CB2).
Palmitoylethanolamide na anandamide nwere njikọ chiri anya ebe ọ bụ na ha bụ endogenous fatty acid amide nke emepụtara n'ime ahụ.
A na-ekwu na PEA na anandamide nwere mmetụta mmekọrịta na ịgwọ ihe mgbu ma na-emekwa ka ndị na-egbu mgbu jiri.
Ndi enzyme acid hydrolase nke dị n'ime ahụ na-agbajikwa ha, yabụ nsonaazụ a na-enweta mgbe ejikọtara ọnụ karịrị karịa mgbe ejiri ya na mgbakwunye.
Phenethylamine bụ mmiri ọgwụ na-enye ahụ mmadụ. A na-ejikarị ya maka ịkwalite arụmọrụ egwuregwu yana ọ nwere ike inye aka belata ịda mba, inye aka n'ibu oke yana ịkwalite ọnọdụ.
Palmitoylethanolamide n'aka nke ọzọ bụ amide acid amide nke amara ama maka mgbu na afọ mgbu.
Egwuregwu abụọ a ejikọtara. Naanị ihe na-ejikọ ha bụ na e dere ha abụọ ka PEA.
Kedụ ka m ga-esi were mgbakwunye Palmitoylethanolamide (PEA)?
Ọ bụ ezie na anyị kwusiri ike na uru mgbochi mkpị palmitoylethanolamide n'etiti uru ndị ọzọ, ọ bara uru ichetara gị ụfọdụ eziokwu banyere PEA. PEA pụtara na ụmụ irighiri mmiri ma ọ nweghị mmiri, nke a na --eme bioav adị palmitoylethanolamide.
Ozi ọma ahụ bụ na, ọ bụ na ndị nrụpụta na-elepụta ụzọ dị iche iche si eme ka bioavide palmitoylethanolamide bioav adị nke kachasị maka ahụ gị. Maka ndị a Pee ntụ ntụ dị n'ụdị ntụ ntụ nkịtị na ụdị ntụ ntụ micromized.
Ebee ka ịzụta Palmitoylethanolamide (PEA) ntụ ntụ?
Anyị nọ na oge na-adọrọ mmasị ebe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị aghọwo ụlọ ahịa nkwụsị maka ihe niile gụnyere ọkọnọ Palmitoylethanolamide. Ọ bụrụ n ’ịtụle iwere PEA, mee nchọpụta n’ebe niile maka ndị nrụpụta legit palmitoylethanolamide. Ọtụtụ ndị ọrụ nke palmitoylethanolamide na-azụta ya na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma kwesịrị ịtụle nyocha ha maka ntụ ntụ kacha mma PEA na ahịa.
CB1: Cannabinoid ụdị m nnata
CB2: Cannabinoid ụdị nnabata II
CENTRAL: Cochrane Central Register nke Ọnwụnwa A Na-achịkwa
FAAH: Ọdụ-acid amide hydrolase
NAAA: N-acylethanolamine hydrolyzing acid dị n’etiti
PPARα: Peroxisome proliferator-arụ ọrụ alpha
PRISMA-P: Ihe Mmasị Achọpụtara Maka Nyocha Nyocha na Mkpụrụ Akwụkwọ Meta-Analysis
VAS Pain: Anya Analog Anya maka Mgbu
ECS: endocannabinoid usoro
 Artukoglu BB, Beyer C, Zuloff-Shani A, et al. Mmetụta nke Palmitoylethanolamide maka mgbu: meta-analysis. Dibia Ọrịa 2017; 20 (5): 353-362.
 Schifilliti C, Cucinotta L, Fedele V, et al. Nke a Micronized palmitoylethanolamide na-ebelata mgbaàmà nke mgbu neuropathic na ndị ọrịa mamịrị. Mgbu Mgbu Na-emeso 2014; 2014: 849623.
 Keppel Hasselink JM, Hekker TA. Ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke Palmitoylethanolamide na ọgwụgwọ nke nhụjuanya neuropathic metụtara ọnọdụ dị iche iche ọrịa: usoro ikpe. Ọrịa Mgbu 2012; 5: 437-442.
 Keppel Hasselink JM, Kopsky DJ. Ọrụ nke palmitoylethanolamide, autacoid, na ọgwụgwọ nke nhụjuanya nke akwara mgbu: akụkọ ikpe atọ na nyochaa akwụkwọ. Nyocha Ọrịa Nyocha 2016; 6 (3).
 Costa B, Colombo A, Bettoni I, Bresciani E, Torsello A, Comelli F. Mmetụta ligand palmitoylethanolamide dị egwu na-ebelata ihe mgbu neuropathic site na mast cell na microglia modulation. Afọ 21st Kwa Afọ nke International Cannabinoid Research Society. St. Charles, Il. Usa: Pheasant Run; 2011.
1.Palmitoylethanolamide (PEA) nyocha
2.Gịnị bụ Palmitoylethanolamide (PEA)?
3.Palmitoylethanolamide uru - Gini ka eji eji Palmitoylethanolamide mee?
4.Onye ga-agbakwunye mmezi nke Palmitoylethanolamide (PEA)?
5.Olee ka PEA si arụ ọrụ maka mgbu?
6. Palmitoylethanolamide ọ bụ cannabinoid?
7. Kedu otu m ga-esi tinye mgbakwunye Palmitoylethanolamide (PEA)?